Midowga Musharixiinta oo xafiiska Rooble u gudbiyey xubnaha lagu muransan yahay ee guddiga doorashada.
May 31, 2021 Xuseen 0
Puntlandtimes (Muqdisho)-Xubnaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa la filayaa in Xukuumadda xilgaarsiinta u gudbiyaan Liiska xubnaha ku jira Guddigii lagu muransanaa ee labada heer ee doorashooyinka dalka oo horey cabasho looga soo gudbiyay.
Warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa sheegaya in Liiska xubnaha ay gudbin doonaan Musharaxiinta ay gaarayaan labaatameeyo ruux oo xubin ka ah Guddiyada oo lagu eedeeyay inay yihiin shaqaalaha dowladda iyo Nabadsugida.
Guddiga Musharaxiinta u qaabilsanaa turxaan bixinta guddigan oo shalay ku shiray Hotelka Jazeera ayaa isku waafaqay tirada iyo xubnaha ay tahay in laga saaro Guddiga, iyagoo laga doonayo inay caddeymo u keenaan.
Sidoo kale Guddiga heerka Wasiir ee Ra’iisul Wasaare Rooble u saaray xaqiijinta caddeymaha xubnahan cabashada laga keenay ayaa la wareegi doona liiskaas, iyagoona bilaabaya kala saarka xubnaha Guddiga.
Guddiga heerka Wasiir ee shalay uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha ayaa kasoo tala bixin doona cabashada laga keenay xubnaha ku jira Guddigii labada heer ee doorashooyinka dalka, iyagoona la wadaagi doona Ra’iisul Wasaare Rooble.